Kedu igwe onyonyo TV bụ Tour de France? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Tour de france on tv - otu esi edozi
Kedu igwe onyonyo TV bụ Tour de France?
I nwere ike na-ele ndịTour de Franceibi na NBC na NBCSN. Iyi bụla ogbo nke 108 mbipụta nkeTour de France naEkwuru ụlọ ọrụ, NBCUniversal ọhụrụ gụgharia ọrụ.
N'isiokwu a, m ga-egosi gị otu ị ga - esi soro Tour de France na - ebi na ọwa n'efu si ebe ọ bụla n'ụwa. Iji lelee Tour de France dị ndụ, anyị na-eji ITV Hub, nke bụ ọrụ nkwanye si ITV, onye mgbasa ozi telivishọn UK.
ITV bụ onye mgbasa ozi gọọmentị nke Tour de France na Great Britain. Nwere ike ịchọta njikọ nke ITV Hub na nkọwa dị n'okpuru isiokwu a. Mbụ ikwesiri mepụta akaụntụ echegbula, ọ bụ n'efu.
M mepụtara akaụntụ tupu oge eruo. Aga m jikọọ. Ọ dị mma, ejikọrọ m ugbu a.
Ma dịka ị pụrụ ịhụ, enweghị m ohere ịnweta ọdịnaya ahụ. Nke a bụ ihe anyị na-akpọ igbochi igbochi
Mkpokọta ahụ achọpụtala adreesị IP nke mba ọzọ ma na - egbochi ịnweta iyi ahụ. Ihe ndị ITV na-egosi na-abụkarị ndị bi na UK, mana enwere aghụghọ iji gafee geo-blocking a ma lelee njem nlegharị anya de France site na ebe ọ bụla n'ụwa. Tupu m egosi gị otu esi ekiri Tour de France na ITV, a na m akpọ gị oku ịmasị isiokwu a, denye aha na ọwa anyị ma pịa bọtịnụ ngosi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọdịnaya anyị.
Nke a ga-apụta ọtụtụ ihe nye anyị ma nyere anyị aka ịmepụta ọdịnaya bara uru karị. Kedụ ka ị ga - esi lee ITV na mpụga UK? Ọfọn, ị nwere ike ịgafe mkpọchi ahụ na ExpressVPN ngwa ngwa. ExpressVPN bụ ngwa ị nwere ike iwunye na kọmputa gị, ama, mbadamba ma ọ bụ smart TV na nke na-enye gị ohere ịgbanwe adreesị IP gị.
Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ UK na ndepụta mba iji mepụta njikọ sitere na mba ahụ, yabụ ị nwere adreesị IP UK. M pịa abụọ. Ọ ga-jikọọ
Ọ ga-ewe naanị sekọnd ole na ole. Emeela, ugbu a ejikọrọ na ịntanetị site na UK, adreesị IP m dochiela adreesị IP nke ihe nkesa VPN na Docklands, ana m enye ume ọhụrụ ibe
M kụrụ egwu, ka anyị gaa, enwere m ohere iyi ahụ, nke a bụ ezigbo iyi dị mma enweghị ịla azụ, enweghị nkwụsị, Tour de France amalitebeghị ma ugbu a ị mara otu esi enweta iyi ahụ.
Dịka ị chọpụtara, ịchọrọ ExpressVPN iji lelee njem nlegharị anya de France na ITV. Iji banye, gaa na revistavpn.com/exp ma ọ bụ pịa njikọ dị na nkọwa dị n'okpuru isiokwu a.
ExpressVPN bụ VPN kachasị mma maka ịgbanye na ihe karịrị 3000 sava na mba 94. Ọ bụ nchekwa, ntụkwasị obi, na ngwa ngwa VPN dị na Windows, macOS, iOS, Android, wdg. Ọ dịkwa na Smart TV.
Mụ onwe m na-eji ya na gam akporo TV. Egosiri m gị otu esi eme ya na kọmputa, mana ọ bụ otu ụkpụrụ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ngwaọrụ iOS na gam akporo yitere ngwa a.
Dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, na ExpressVPN ị nwere ike ịmekọrịta njikọ sitere na ọtụtụ mba ndị ọzọ
Ndi Ik, kamakwa USA, Canada, Australia, Germany, France, Spain. ..Nke a pụtara na ị nwere ike ịmekọrịta njikọ sitere na mba ndị a.
ExpressVPN abụghị n'efu. Ọ bụ ụgwọ VPN, mana ọ na-efu dollar ole na ole kwa ọnwa. Site na njikọ anyị ị ritere uru site na mbelata nke 49% na ọnwa 3 n'efu.
ExpressVPN na-enye nkwa ịkwụghachi ego 30 ụbọchị, nke pụtara na ị nwere ike ịdebanye aha ma jiri ọrụ ahụ ọtụtụ izu (oge zuru ezu iji mezue njegharị de France) wee rịọ nkwụghachi ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ya mere, ị nwere ike ilele usoro niile nke Tour de France na ITV Hub wee rịọ nkwụghachi. N’ikpeazụ, ị kwụghị ihe ọ bụla.
Agbanyeghị, ana m akwado ka ị debe ndenye aha gị ka ExpressVPN nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ. Na ExpressVPN, ị nwere ike ịlele ọwa TV ọ bụla n'ebe ọ bụla n'ụwa. Ọwa TV Britain, kamakwa ọwa TV nke America, ọwa Australia TV, ọwa TV Canada, ọwa TV ndị France, wdg na ụwa niile.
Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ obodo nke onye mgbasa ozi dị mkpa na ndepụta a. I nwere echiche
Ezigbo ihe ọzọ maka ITV bụ SBS, onye mgbasa ozi telivishọn nke Australia. SBS bụ onye mgbasa ozi gọọmentị nke Tour de France na Australia. Naanị họrọ Australia site na ndepụta nke mba, wee gaa sbs.com.au/ondemand Ọ bụrụ na ị ga - elele Tour de France na nkọwa French, ị nwere ike ile ya na France.TV, France Télévisions 'streaming streaming, a free otu French TV, dị ka ị pụrụ ịhụ ebe a ka ha na-agbasa mgbasa ozi Tour de France.
Naanị họrọ France na ndepụta nke mba, wee gaa France.TV ma mepụta akaụntụ efu. Nwere ike ịgbaso egwuregwu Tour de France na nkọwa French.
Na ExpressVPN ị nwere ike ịlele ọtụtụ ọwa ndị ọzọ anaghị akwụ ụgwọ gụnyere RTBF, ụlọ ọrụ TV nke Belgium nke na-agbasa Tour de France na agbụrụ ndị ọzọ na-agba ịnyịnya, yana egwuregwu Euro 2020 niile, niile Formula 1 Grand Prix ị ga-ahọrọ Belgium ebe a .
Ọwa ndị a niile bụ ọwa n'efu na ị nwere ike ịlele na ntaneti ekele ExpressVPN. Na nchịkọta echiche a bụ iji ExpressVPN iji kpoo njikọ sitere na UK site na ịgbanwe adreesị IP gị na adreesị IP UK dochie.
Nke a ga - eme ka ITV Hub chee na ị sitere na UK wee nye gị ohere ilele Tour de France ka ọ dị ka ị nọ na UK. Ọ dị mfe. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ile ya na SBS, France TV ma ọ bụ RTBF
ExpressVPN nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ: Nweta akwụkwọ ndekọ aha ndị ọzọ nke Netflix. Netflix USA, Netflix Canada, Netflix Japan
Nweta ọtụtụ ihe nkiri na usoro Ihe ngosi na-adịkarị na mba gị. Chọgharịa ma budata na-enweghị aha. Iji nweta ebe nrụọrụ weebụ egbochiri site na ngwaọrụ ọ bụla, zụta tiketi ụgbọ elu dị ọnụ ala na ọtụtụ ndị ọzọ.
Echekwala banyere VPN n'efu. Otu n'ime ndị a agaghị ekwe ka ịmegharị njikọ sitere na UK, Australia, France ma ọ bụ Belgium. I nweghi ike ilele Tour de France na ITV Hub, SBS On Demand, France.TV ma obu RTBF Auvio jiri VPN n'efu.
Free VPNs dịkwa nwayọ ma anaghị enye bandwidth a na-akparaghị ókè. Kama, ikwesiri iji usoro ikpe nke ExpressVPN nyere. Ọ dị mma, nke ahụ bụ maka taa! Ugbu a ịmara otu esi ekiri Tour de France na-ebi na ọwa n'efu, n'agbanyeghị ebe ị nọ n'ụwa
Dị ka ị hụworo, ọ dị mfe. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nweere onwe gị ịjụ n'okpuru ebe a, m ga-aza gị ozugbo enwere ike. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị ma ọ bụ hụ na ọ bara uru, biko nwee mmasị na ịdenye aha na ọwa.
Daalụ ịhụ gị oge ọzọ!
Kedu oge bụ Tour de France na TV taa?
Kedu mgbe bụ 2021Tour de FranceIsi ihe na? Egosiputara ihe di elu na 19: 00 kwa mgbede na ITV4, ewezuga ihe ngosi 21 nke ga-adi na 21: 00. Isi ihe dị na 20: 00 na Eurosport 1, belụsọ maka agba nke mbụ, nke ga-amalite site na 20:30.
Ebee ka m nwere ike ilele Tour de France 2021?
Ị nwere ikelelee njem nke de de Franceibi na ad-free naiheNgwa Eurosport na Eurosport.co.uk. BudataiheEurosport ngwa maka iOS na gam akporo ugbu a.6 ụbọchị gara aga
Kedụ ka m ga - esi lelee Tour de France n’efu?
Olee otúLeleeIHENjegharị DE France. Ị nwere ikencheiheTour de Francebi na nd-n'efuna ngwa Eurosport na Eurosport.co.uk. Budata ngwa Eurosport maka iOS na gam akporo ugbu a.3 ụbọchị gara aga
Ebee ka m nwere ike ilele Tour de France n'efu?
Olee otúLEE njegharị DE FRANCE. Ị nwere ikelelee njem nke de de Francebi na nd-n'efuna ngwa Eurosport na Eurosport.co.uk. Budata ngwa Eurosport maka iOS na gam akporo ugbu a.Ọnwa Jun 27, 2021
Kedu efere Channel bụ Tour de France?
TVọwa: NBCSN, NBC (Ọwachọta: Comcast Xfinity, Verizon Fios, ụdịdị dị iche iche / Charter, Optimum / Altice, DIRECTV,Efere, AT&T U amaokwu, fuboTV, èbè.) Live iyi: NBC Egwuregwu Live | Sbè | Ekwuru ụlọ TV | fuboTV - Ọ bụrụ na ị nwere eriri, ịnwere ike iji nzere nbanye gị site na NBC Sports Live ..Ọnwa Jun 26, 2021
ITV na-egosi Tour de France?
ITVga-enwe n'efu, na-ebi ndụ kwa ụbọchị na TV na nkwanye naITVHub na agbatị ihe ngosi nkeNjegharị, na-agụta karịa awa iri asatọ na ise nke ịgba ịnyịnya ígwè gafere izu atọ. Ndị mgbasa ozi na-agba ịnyịnya na-emebu na UK, GCN + na Eurosport ga-ekpuchi 2021Tour de Francenakwa.Ọnwa Jun 25, 2021
Bụ Tour de France na TV taa?
Tour de France2021: Na-ebi ndụTVndu
Na-ebi ndụTVmkpuchi nke 2020Tour de Francega - egosiputa na Eurosport, ITV4 na S4C tinyere ihe mgbede.
Enwere m ike ile Tour de France na Hulu?
Gịnwere ikechọtakwa 2021Tour de Francedịrị ndụIyina ndenye aha na-arụsi ọrụ ike na n'elu-topGụghariaọrụ na-enye NBC. Obi dị m ụtọ, e nwere ọtụtụ nhọrọ, gụnyere YouTube TV,Hulu+ Live TV, fuboTV, Sling TV (na ahịa ndị ahọpụtara), ma ọ bụ AT&T TV ugbu a.Ọnwa Jun 26, 2021
Ebee ka ihe nkiri ITV Tour de France dị?
Venner si Vsquared arụpụtaITV simkpuchi na otu nke 18 naFrance(gụnyere ndị dị ka Imlach, Boardman na Boulting, yana ndị na-ese foto atọ, ndị injinia anọ, ndị ọrụ ntanetị, ndị ọkwọ ụgbọ ala, onye na-emepụta ihe na onye na-enyere aka na-emepụta ihe) na 20 laghachi na EalingIhe nkiriStudios, site na ebe esere ihe oyiyi ahụITV si...
Ebee ka m nwere ike ịlele Tour de France na TV?
Nabata n'ụlọ nke 2020 Tour de France, biri na NBC, NBCSN na NBC Egwuregwu Gold. Ebe ị ga-ahụ zuru TV oge, ndụ iyi ọmụma, ụzọ na ogbo preview na ndị ọzọ.
Kedu mgbe Tour de France na-amalite na US?
Ọ na-egosiputa kwa ụbọchị njem nke de de France nke mbu. Ihe mkpuchi ahụ na-amalite n'isi ụtụtụ ebe a na US n'ozuzu ya na 7 nke ụtụtụ. N'ụbọchị ụfọdụ, ọ nwere ike ịmalite na 6 nke ụtụtụ, 6:30 am na 8 am ET. 21 nke bụkwa oge ikpeazụ a ga-amalite na 9 nke ụtụtụ (oge niile dabere na Eastern Standard Time).
Kedu mgbe bụ Tour de France na Denmark?
Dịka e yigharịrị UEFA Euro 2020 na isi obodo Denmark ga-anabata asọmpi 4, asọmpi a bufee Brest. N'aka nke ọzọ, iji zere ijikọ na 2020 Summer Olympics, njem ahụ kwagara na 26 June ruo 18 July kama nke 2 ruo 25 July, 2021.